खप्परको दोष | Kendrabindu Nepal Online News
1677190 101557 1203230 372403
६ माघ २०७६, सोमबार १३:२०
हाम्रो समाजका अधिकांश घटनाक्रमहरू ‘सनसनीपूर्ण खुलासा’ बनेर सामाजिक सञ्जालमा छाउन थालेका छन् । म कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु । यस्ता खाले काण्डहरू हेरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन । र, हेरेर धारणा बनाउनेहरूलाई पनि त्यसरी एकतर्फी भिडियो हेरेर धारणा बनाउनु हुँदैन भनेर सुझाव दिने गर्छु ।
तर, कहिलेकाहीँ भिडियोको ‘थम्नेल’ वा त्यसको ‘हाइलाइट’ यसरी लेखिएको हुन्छ कि त्यो भिडियो नहेरी सुख पाइँदैन । यो पटक त्यस्तै भयो, ‘स्याङ्जाका कुमारले तनहुँकी अनुपालाई दुई छोरीसहित भगाए’ यो स्याङ्जाको कुरा भएको कारण मैले भिडियो नहेरी बस्न सकिन ।
तनहुँका नकुल अधिकारी जो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबईमा बस्थे । उनकी ३३ वर्षीय श्रीमती अनुपा स्याङ्जा टक्सारका कुमार भन्ने मान्छेले दुई छोरीसहित भगाएको भन्ने आरोप नकुलले लगाएका छन् । त्यहाँ नकुललाई युट्युबका पत्रकारले “हामी तपाईँलाई न्याय दिलाउन आएका हौँ, हामीसँग सबै कुरा खुलस्त पारेर भन्नुहोस्” भन्ने शैलीमा रहस्यहरू खोतल्दै छन् । म अचम्मै पर्छु । विस्फारित हुन्छन् मेरा आँखा र उदेक लाग्छ मलाई । अरबमा बरबाद भएका नेपाली जिन्दगीको यो भयावह अवस्था हेरेर ।
कहानी अगाडि बढ्छ । नकुल र अनुपाको सात कक्षामा पढ्दादेखि नै लभ थियो । नकुल स्विकार्छन् “हामी त ७ कक्षादेखि नै सँगै हिँडेको हो, लभ गरेर बिहे गरेको हो” । १७ वर्ष अगाडि उनीहरूले बिहे गरे । तेह्र चौध वर्षकी जेठी र अर्की सानी काखे छोरी छन् । कुमारले स्कुल पढ्दै गरेकी चौध वर्षकी छोरीसहित ३ जनाको परिवार नै उठाएर लगिदिएछन् (आरोप अनुसार) अहिले नकुल दुबईबाट फर्किए तर उनले छोराछोरीको लागि ल्याएको खेलौना समेत आफ्ना छोराछोरीलाई दिन नपाएर विक्षिप्त छन् ।
सानैमा प्रेम विवाह गरेकी श्रीमतीमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । पैतृक सम्पत्ति जति थियो त्यो उनले श्रीमतीकै नाममा गरेका थिए । घरमा तला थप्नुपर्ने भयो । अलिकति अचल सम्पत्ति जोडेको ऋण पनि तिर्नु थियो । अनुपाले नकुलसँग १२ लाख बैङ्कबाट झिकेर सात लाख ऋण तिर्ने र बाँकीले घरको तला थप्ने योजना सुनाइन् । मासिक ७५ हजारको दरले २१ महिनाको तलब नकुलले श्रीमतीलाई पठाए । पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाएको घर धितो राख्न स्वीकृति पनि दिए तर अनुपाले १२ होइन २८ लाख रुपैंया उनलाई थाहै नदिई निकालेर कुमारसँग भागिन् । दुबईबाट फर्केका नकुललाई अहिले बैङ्क र साहुहरूले घेरिरहेछन् ।
त्यति मात्र होइन अनुपाले आफ्ना माइतीहरूसँग समेत मनग्य सापटी लिएकी रहेछिन्, हरेक ठाउँ सक्ने जतिबाट पैसा उठाएर श्रीमानले परदेशमा कमाएको र बैङ्कबाट निकालेको समेत पैसा लिएर अहिले अनुपा कहाँ कुन ठाउँमा छन् नकुललाई अत्तोपत्तो छैन । फोन ‘अफ’ छ । छोरीसँग कुरा हुँदा म फर्कन चाहन्छु भन्छिन् तर कुन ठाउँमा छु भन्ने बताउन सक्दिनन्, उनीहरू काठमाडौँमा भएको लख काट्छन् नकुल ।
झगडा सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको रहेछ । कुमारले नकुलकी श्रीमती सँग ‘हाई हेल्लो’ गर्ने, श्रीमतीको पोस्टमा कमेन्ट गर्ने गरेको नकुलले थाहा पाएपछि ‘को हो कुमार ?’ भन्ने भनेर सोधेका रहेछन् । अनुपाले सधैँ ‘मामाको छोरा हुन्’ भनेर चिनाउने गरेकी थिइन् रे । पछि कुनै कमेन्ट वा म्यासेज को कुरालाई लिएर नकुल र कुमारबीच भनाभन भएको थियो रे, त्यही कुराले मात्रै यताको सबै सम्पत्ति कुम्ल्याएर नकुलकी श्रीमती उनलाई छोडेर कुमारसँग गएको पक्कै नहुनुपर्ने ।
म भिडियो अगाडि हेर्दै जान्छु । युट्युबरले तपाईँको कान्छी छोरीको नाम के हो भन्दा नकुलले छोरीको नाम थाहै छैन भने, देखेकै छैनन् रे । उनी परदेशमै हुँदा जन्मिएकी छोरी भएको कारण यस्तो भएको हुन सक्छ । मैले सोचेँ कमसेकम छोरीको नामसम्म त थाह पाउनुपर्ने थियो । नकुल आफैले केयर गर्न नसकेर पो भागिन् कि ? यही दोसाँधमा अगाडि भिडियो हेर्दै छु म ।
दसैँमा टिका थाप्न आएकी श्रीमती त्यसपछि घरमा फर्केर आइनन् । म काठमाडौँमै व्यवसाय गरेर बस्छु भन्न थालिन् । नकुलले काठमाडौँ नजाऊ बरु म फर्केर आएपछि जे गर्ने हो गरौँला भनिरहे तर श्रीमतीले मान्दै मानिनन्, उनले घर फर्कन जोड बल गरेपछि श्रीमतीले “मेरो आस नगर्नु, म ऋणमा डुबेँ, मैले व्यवहार बिगारेँ अब म त्यहाँ आउन सम्भव छैन हजुरले आफ्नो व्यवस्था गर्नुहोला तपाईँलाई धोका दिन पुगेँ मलाई माफ गर्नुहोला” यत्ति भनेर अनुपाले फोन काटिन् त्यसपछि सम्पर्क हुन सकेको छैन ।
यहाँ पीडित भनिएका नकुलले प्रहरीमा उजुरी गरेको प्रसङ्ग कतै सुन्न पाइएन । उनले सोचे पोइल गएका महिला युट्युबका पत्रकारले फिर्ता ल्याइदिन्छन् । श्रीमती नपाए पनि सम्पत्ति त पक्कै फिर्ता आउँछ (त्यहाँ युट्युबका पत्रकारले दाबी पनि गर्छन्, ‘हामी राहत दिलाउँछौँ भनेर) त्यसैले नकुल ढुक्कसँग मनको कुरा खोल्छन् जुन उनले प्रहरीको अगाडि सायदै खोल्ने थिए होला ।
म एकोहोरिएर सोचिरहेछु, त्यस्तो कुन परिस्थिति आइपर्‍यो र अनुपालाई ऋण लाग्यो ? कसले खायो त्यो पैसा ? कुन बहकाउमा आएर अरूलाई दिएको हुनसक्छ ? कुन आवश्यकता पुरा गर्न त्यो पैसा खर्च भयो होला ? वा कसैले अन्य प्रलोभनमा पारेर अनुपाको व्यवहार बिगार्दिएको होला ? मनमा यस्तै कुरा खेल्दै थिए, मसँगै बसेर भिडियो हेरिरहेको मेरो साथीले मलाई सोध्यो यो ‘काण्ड’ मा पीडित को हुन सक्छ र यो काण्डको मुख्य कारण के होला ?
म फेरि विस्फारित आँखा बनाएर साथीलाई हेर्छु, मनमा अनेक तर्कना घुम्छन् कुरा खेल्छन् र खुइय्य सुस्केरा हालेर जवाफ दिन्छु ‘हामी नेपालीको खप्परको दोष हो’ । न नकुल विदेश जान्थे, न श्रीमान् श्रीमती एक्ला एक्लै भएर बस्नु पर्थ्यो । न अनुपाले एक्लै व्यवहार गर्नु पर्थ्यो न कुमार जस्ता मान्छेहरूले उनको जिन्दगीमा स्थान पाउँथे र न यो घरबार बिग्रन्थ्यो ।
यहाँ दोष कसैको छैन, यो खप्परको दोष हो । मेरो जवाफ सुनेपछि साथी उठेर बाहिर गयो र श्रीमतीलाई फोन गर्‍यो, छोरी खोइ ?
Prevनेकपा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको बैठक
आवश्यकता पूरा हुने सहायता स्वीकार गरौँ : काँग्रेस सहमहामन्त्री महतNext
कुमार पौडेलको यो दुनियाँ बजारमा (भिडियो सहित)
नेपाल स्काउटद्वारा भोका पशुपंक्षीलाई दाना खुवाउने अभियान सुरु
अक्षरा स्कुलले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने
भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने भन्दै कृषिमन्त्रीद्वारा स्थानीय सरकारलाई पत्राचार (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज नै गायब (भिडियोसहित)
कोरोनाबारे चेतना जगाउन रौतहट प्रशासनको नौलो अभियान (भिडियोसहित)
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा मात्रै चीनमा भन्दा दोब्बर बढीको मृत्यु (भिडियोसहित)
लकडाउन उल्लंघन गर्ने वडा अध्यक्षहरुलाई एक महिना कैद (भिडियोसहित)
विवादमा पर्दै सरकारका निर्णयहरुदेखि कोरोनाका कारण खाद्यसंकट आउन सक्नेसम्म (भिडियोसहित)
कोरोनाको संकटबारे अर्थमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग छलफल
सनराइज बैंकद्वारा पिपिइ हस्तान्तरण